Inkosi iyagoloza yehliswa uhulumeni esihlalweni sobukhosi
PHAMBILI ngummeli wenkosi uMnuz Robin Topping nenkosi Bhekizizwe Luthuli namalungu omndeni nezinduna. Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/AFRICAN NEWS AGENCY(ANA)
IBHODLA umlilo inkosi yaseMathulini eMthwalume, ngesinqumo sikahulumeni waKwaZulu-Natal sokuyiphuca ubukhosi.
Ishaya phansi ngonyawo inkosi Bhekizizwe Luthuli, ithi iyosuswa wukufa noma yiSilo Samabandla kuphela esikhundleni.
Inkosi ibiseNkantolo eNkulu, eMgungundlovu ngoLwesine olwedlule iyofaka isicelo sokuba kubekwe eceleni okwesikhashana isinqumo sokuthi ayiseyona inkosi njengoba isiphonsela inselelo isinqumo.
Ikhuluma neSolezwe ngeSonto ngaphambi nangemuva kwecala, ithe isinqumo sokuyidiliza yinto engathi shu. Ithe yona iyinkosi ngokuzalwa ngakho-ke ayikwazi ukusuka esikhundleni ngoba kusho umuntu okhethelwe iminyaka emihlanu nje vo.
“Ngiyohlukana nesikhundla sami uma ngifa noma kusho iSilo Samabandla. Bayadlala abathi bangisusile esikhundleni.
“Ngizohlonipha umthetho njengoba lithe ijaji asibuye mhla ka-19 kwephezulu sizoluxoxa lolu daba,” kusho inkosi ebibukeka ingakhathazekile.
Inkosi iyiLungu lePhalamende ngaphansi kwe-IFP.
Okhulumela uMnyango weziNdaba zoMdabu eKZN, uNksz Nonala Ndlovu uthe uhulumeni uzosiphikisa isicelo esifakwe ngowayeyinkosi yaseMathulini ngoba kulandelwe yonke imigomo ngokuxoshwa kwakhe.
Ummeli wenkosi, uMnuz Robin Topping uthe bazolwa naso isinqumo sokudiliza inkosi ngoba asikho emthethweni.
Uthe awukho umthetho olawula izintela eziqoqwa ngamakhosi okuyinto yesiko lasemandulo.
Uthe le mali ebizwa ngeyokukhonza yisiko elidala akuyona into eyenziwa uLuthuli kuphela kodwa yayenziwa endulo futhi namanje yenziwa ngamakhosi amaningi, ngakho-ke uhulumeni akakwazi ukwephuca inkosi isihlalo ngoba iqoqa intela yokukhonza.
Ngenyanga edlule uNdunankulu uMnuz Sihle Zikalala ubhalele inkosi incwadi eyazisa ukuthi isusiwe esikhundleni, wabe eseyalela umndeni ukuba ubeke enye inkosi zingakapheli izinsuku eziwu-30. Isinqumo size emva kokuba umphakathi umangalele inkosi kuhulumeni ngokuwuhlukumeza, uthi iwukhokhisa izimali ezishisiwe ngokwakhiswa endaweni.
Inkosi ibizelwe esigcawini sokuqondiswa ubugwegwe kodwa kuthiwa kayilubhadanga lapho. Kwaze kwathathwa isinqumo ingekho.
Usihlalo wenhlangano yabahlali iSanco wesifunda Ugu oyisakhamuzi, uMnuz Howard Msomi uthe yibo beyiSanco abafaka isikhalo ngenkosi.
Uthe umphakathi ubukhathele wukuhlukunyezwa yinkosi ngakho umphakathi usishayele ihlombe isinqumo sikahulumeni sokwehlisa inkosi esihlalweni.
Uthe inkosi ibifuna uR10 000 kumuntu obekwayo endaweni bese kuba uR3000 uma kade wakhe ngaphakathi sewushintsha inxiwa. Enye imali ebikhalisa uthe nguR2000 “wokuphendula ibhantshi” athe imali efuneka enkosaneni emva kokushona kukayise ngoba kuthiwa yiyona esithatha isigqiki sikayise.